Fitiavana ho an'ny rehetra avy amin'ny nosin'ny fanahy maro sy fo iray
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fitiavana ho an'ny rehetra avy amin'ny nosin'ny fanahy maro sy fo iray
Janoary 7, 2019
Mpanoratra Dr. Peter E. Tarlow
I Jamaika dia sady toerana no misy toe-tsaina.
I Jamaika dia sady toerana no misy toe-tsaina. Ity dia tany misy masoandro sy surf, ranomasina ary tendrombohitra. Araho hatrany ny traikefa hanan'ity firenena ity eo ambany fitarihan'ny minisitry ny fizahantany Edmund Bartlett hanana ny toe-tsain'ny fahaizan'ny fizahan-tany.
Raha vao ivelan'ny toeram-pizahan-tany lehibe dia misy ny “Jamaica” akaiky kokoa: ny tontolon'ny fambolena akoho sy kafe, ny tontolon'ny mozika reggae, Bob Marley ary “eny-man”.
I Jamaika dia tontolon'ny jiolahin-tsambo koa amin'ny fotoana hafa, galleons Espaniola feno volamena, ary tranobe britanika kanto tamin'ny andron'ny fanjanahantany anglisy. Ireto tontolo hafa ireto dia ilay Jamaika misy ny fanahy, ilay tany hafahafa tsy miorina amin'ny tsirairay, fa ny fahatsiarovan-tena. Eto isika dia miorina manoloana ny atin'ny Karaiba manga dia mahita toerana ahatongavan'ireo fanahy mamorona rojom-piainana manan-tantara ary miaraka am-po mifandray amin'ny fanahin'ny lasa miaraka amin'ny fanantenana rahampitso.
Any Jamaika dia misy mahafantatra fa ny fizahan-tany dia mihoatra ny orinasa, io no tena izy, ny fahatsapana ny zava-misy ankehitriny ampiarahana amin'ny fahatsiarovana, io no mpandeha an-tongotra ny nofy tsotra manohina ary mamelona ny eritreritra ary izay nipoiran'ny fahatsiarovana vaovao.
Fantatra amin'ny tsikitsiky ny Jamaikana, ny finiavany angamba hilaza ny eny, ary firenena misy foko maro. Raha ny tena izy, mirehareha be ny Jamaikana amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny fireneny, fifangaroan'ny isam-batan'olona izay mampatsiahy ny mpitsidika ny voanio voanjo ao an-toerana, izay misy “akora” sy loko maro.
Tsy midika izany fa tonga lafatra daholo. Jamaika dia misy olombelona ary ny olombelona dia miteraka olana.
Jamaika, toy ny ankamaroan'ny Karaiba, dia tsy manana olana. Ny tsy manam-paharoa, na izany aza, indrindra amin'ity faritra ity, dia ny finiavan-pirenena hiatrika fanamby, hikaroka fomba handresena ireo fanamby ireo, ary hamorona fahatsapana tanjon'ny firenena. Eto ny olona dia mahatakatra fa ny fanahin'ny faharetana no mamela ny fandresena zava-baovao amin'ny fo manontolo sy fahatsapana tanjona.
Toy ny any amin'ny ankamaroan'izao tontolo izao, dia misy ny mampiavaka ny manana sy ny tsy manana, ny mpiasa sy ny mpanao vakansy. Ny tsirairay dia mila ny iray hafa, ary ny tsirairay eo ambany eo ambany dia mankasitraka ny fandraisan'anjaran'ny hafa. Ireo fanamby ireo dia ampahany amin'ny fiainana tamin'ny taonjato voalohany. Hisy foana ny fanamby, izy ireo dia ampahany amin'ny toetran'ny olombelona. Ny tsy manam-paharoa dia tsy ny fanamby, fa ny fomba fahitantsika azy ireo.
Ny lesona momba an'i Jamaika dia na dia milentika aza ny masoandro dia andro vaovao no hateraka ary na inona na inona fanamby ateraky ny haizina dia hamirapiratra indray ny masoandro ary isaky ny andro vaovao dia mamorona hetsika vaovao feno fanantenana sy tsiky.
Ity no fiheverana voalohany nataon'i Dr. Peter Tarlow, eTN Travel sy Security manam-pahaizana taorian'ny nahatongavany androany tany Jamaika.
Nisintaka, nihitsoka, nanafoanana ireo mpizahatany: savorovoro tany Alemana, Suisse ary Austria
Manasa ny vahiny i Centara mba hiaina ny “Best in Travel” eto amin'ny Ranomasimbe Indianina amin'ny taona 2019
Mpandeha Royal Caribbean roa no nanandrana nanaporofo ny COVID-19 tamin'ny fitsangantsanganana vaksinina feno
Vaovao momba ny dia any Kroasia
Fanamarinana lafo vidy ho an'ireo maso ivoho izay mamaritra indray ny traikefa Kroaty
Delta Airlines Flight Attendant dia tapa-kevitra ny hianjera amin'ny DL 1730 avy any LAX mankany ATL midair
Ny fetiben'ny zava-kanto tranainy indrindra any Italia dia nanova an'i Spoleto
Interview: Inside ny sain'i Finnair CEO
Fizahan-tany any Italia mitsiky noho ny Campania Teatro 2021
Tiorka sy Caicos
Nosy Turks sy Caicos dia namoaka fanamarihana ambaratonga voalohany avy amin'ny CDC
Air Canada dia manitatra ny fe-potoana famerenam-bola COVID-19
FlyNAS dia mandefa sidina mivantana eo anelanelan'ny Saudi sy Seychelles manomboka amin'ny Jolay 2021